Qaraxii maxkamadda Bosaso oo Qadar lagu eedeeyey iyo hadalkii laga duubay safiirka Qadar oo tarjuman (dhegayso) – Radio Daljir
Qaraxii maxkamadda Bosaso oo Qadar lagu eedeeyey iyo hadalkii laga duubay safiirka Qadar oo tarjuman (dhegayso)
Luulyo 25, 2019 4:36 g 0
NY Times ayaa horay u sheegtay in safiirka Qatar iyo ganacsade saaxiib la’ ah amiirka Qatar ay ka wada hadleen weerarkii qaraxa ee maxkamadda Bosaso oo ganacsadaha uu sheegay inay fuliyeen saaxiibadood Soomaaliya, sida lagu helay cod taleefan ah oo la dhagaystay.
Qaraxan oo dhacay bishii May ayaa waxaa ku dhaawacmay kow iyo toban qof oo ay ku jiraan hooyo iyo gabadheed oo hooyadu indhaha ay beeshay.
Haddaba danaha dowladaha Khaliijka iyo saamaynta Qatar ee ay ku leedahay falalka amniga lidiga ku ah ee magaalada Bosaaso ayaa waxaa ka mid ah inay gabaad ay siisay hogaamiyihii iyo aasaasihii Al-shabaab ee buuralayda Calmadow ee gobolka Bari Maxamed Siciid Attam.
Aqoonyahan Cabduqaadir Cali Salaymaan Camo oo faaleeya siyaasadda Puntland, Soomaaliya iyo dalalka Carabta ayaa sheegay inay wax laga xumaado ay ahayd jawaabtii degdega ee ay dowladda faderaalka ka bixisay eedaynta Qatar, wasiirka arrimaha dibadda ayaana warka lagu daabacay NY Times ku sheegay mid been ah, isagoona intaasi ku daray inuu ayidsanyahay warsaxafadeedka beeninta ku lug lahaashiyaha weerarka ee dowladda Qatar.
Camo ayaa sheegay inay ahayd dowladda inay magacowdo guddi baaritaan ah, kahor inta aanay difaacin siyaasadda Qatar ee Soomaaliya.
Golaha Naafadda oo ka hadlay Muqdisho qaraxyo ka dhacay
Amniga Caasimadda Puntland ee Garoowe oo aad loo adkeeyey (dhegayso)